I-Ebook yasimahla: Mamela phezulu! Ukuphulaphulwa kweNtlalo kwiShishini elincinci Martech Zone
I-ebook yasimahla: Mamela phezulu! Ukuphulaphulwa kweNtlalo kwiShishini elincinci
NgoLwesithathu, Oktobha 16, 2013 NgoLwesithathu, Oktobha 16, 2013 Douglas Karr
Ngaba bayakwenza ngempela ndikucacela? Akunzima kangako ukufumana ezi ntsuku.
Ukumamela ngokwaseburhulumenteni Ngokuqinisekileyo yeyona teknoloji ibalulekileyo yokuthengisa ukuthengisa ukusukela oko kwimidiya yoluntu uqobo. Abo kuthi abanemvelaphi yentengiso yesintu bayazikhumbula iintsuku zokuqonda ukuba ngubani umthengi wakho kwaye bacinga ntoni ngawe bafuna iipoli, amaqela ekugxilwe kuwo, kunye / okanye ukukhuphela uphando oludinayo kwenye inkampani, konke oku kuthathe ixesha elininzi kunye nemali kunokuba besifuna.
Kule mihla, ukuqonda okuxabisekileyo kwabathengi kunye nomzi mveliso obefudula kubiza, kudla ixesha kwaye ngoko nangoko kungokwembali ngoku kwaye lilula. Ukubeka iliso kwimidiya yoluntu ayisiyokuthengisa kuphela: unokumamela imeko yecandelo, uhlalutyo lokhuphiswano, ukuqonda imveliso, kunye nezinye iimeko ezininzi zokusetyenziswa. Nangaliphi na ixesha ufuna ukwazi ukuba bathini abanye abantu malunga nento enento yokwenza neshishini lakho, ukumamela kwezentlalo yindlela ekhawulezayo nelula yokufumanisa.
Amandla eendaba ezentlalo yinethiwekhi yoluntu kwaye umxholo wakho ungamafutha ayo!
Abaxhasi bethu e Meltwater Bakhulule i-e-ncwadi yabo entsha, Mamela phezulu: Isikhokelo esiQinisekileyo sokuSebenzisa uLuhlu lweeNtlalontle kwiShishini eliNgcono ibhalwe ngu U-Leslie Nuccio. U-Leslie utyhutyha nzulu kuhlolo lweendaba zosasazo.
Esi sikhokelo sibanzi sihamba amashishini ngendlela yokuqhuba Intengiso yeLizwi-ngomlomo, ukufumanisa ukuba abathengi bakho kunye amathemba afana nawe, kwenziwa kanjani gcina iithebhu kukhuphiswano, kwenziwa kanjani Chonga ukuba ngubani othethayo malunga neshishini lakho, indlela yokwenza fumana iincoko ezibalulekileyo kwaye ungayiqala njani eyakho imeme! Ingaphezulu kwamaphepha angama-30 anemibala egcwele uburharha, imizekelo emnandi, izibalo, iinkcukacha kunye nolwazi onokuthi ulusebenzise ukuqhuba iziphumo zeshishini ngalo mzuzu.
Uya kufunda ukuba yintoni esweni kwimidiya yoluntu, uyisebenzisa kanjani imithombo yeendaba kwezentlalo kumbutho wakho wentengiso nangaphaya, kwaye kutheni imicimbi yentengiso yemidiya yoluntu.
Emva kwayo yonke loo nto, ngabasebenzisi be-Twitter bodwa abathumela umndilili we I-tweets ezingama-400 ngosuku, ayikufanelanga uphondo lwendlebe lwedijithali?
tags: ukhuphiswano lokuphulaphulaebookmamelajonga ukhuphiswano lwakhoUkumamela ngokwasentlalweniukubeka iliso kwimidiya yoluntuukubeka iliso kwezentlalomfaziukuthengisa-ngomlomo
MarketingPilot: IMicrosoft Dynamics CRM yoLawulo lweNtengiso eHlanganisiweyo
Isikhokelo seMidiya yoLuntu saBasebenzi bezeMali